Thursday July 21, 2016 - 00:05:35
Labadaan kooxood ayaa ku wada jiray guruubka labaad, waxaana galabta sama-fiinaalaha usoo baxay kooxaha Puntland,Banaadir,Jubbaland iyo Hiiraan/Shabeelaha dhexe.
Ciyaarta galabta ayaa ahayd mid aad uxiiso baddan, waxaana usoo daawasho tagay masuuliyiin kala duwan oo ka socdey Galmudug,Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe iyo weliba boqolaal taageerayaal labada dhinac u sacaba tumayay.
Markey ciyaartu soo dhammaatay ayay labada kooxoodba u sheegeen saxaafada iney ku faraxsan yihiin wixii galabta dhacay, waxa kale ay sheegen sababta loo yimi halkan ay tahay guul iyo guuldarro ayna koox un raaci lahayd.
Waxaa madaxa isla galaya maalmaha soo socda kooxdaha Banaadir iyo Jubbaland, Puntland iyo Hiiraan/Shabeelaha dhexe, kuwaasoo isagu soo haray koobka, berri oo khamiis ah ayaa la nasanayaa wixii ka danbeeyay waxaa la isku diyaarinayaa ciyaaraha harsan.
Masuuliyiinta ciyaaraha dalka ayaa sheegay iney tahay ahmiyada koowaad ee koobkan sidii dhalintu isku dhex gali lahaayeen isla markasna loo sii xoojin lahaa xirfada kubadda cagta.
Hay'adda PSF Oo Soo Saartay War-murtiyeed Ay Kaga Hayleeyso Qodobo Muhiim Ah
Gudiga Doorashada Galmudug Oo Shaacinayaa 5-ta kursi Ee Ugu Horaysa Doorashada Barlamaanka Federalka Soomaaliya
R/Wasaaraha XFS Iyo Madaxweynaha Galmudug Oo La Kulmay Guddiyada Dashooyinka Heer Federaal Iyo Heer Dowlad Goboleed
R/Wasaaraha XFS oo Galabta Siweyn Loogu Soo Dhaweeyay Caasimada Galmudug Ee Dhuusamareeb